Abalinganiswa abanovelwano nabaphosakeleyo bokufumana uDory | Izidalwa ezikwi-Intanethi
I-Disney Pstrong ityhila abalinganiswa abatsha abathandekayo 'bokufumana uDory'
Ukufumana uDory ngu Ifilimu ye-Disney Pstrong ye-3D ezayo Kwaye kukulandelelana kokufumana iNemo. Inayo yonke into ecaleni kwayo ukuba ibe yenye i-adventure eyonwabisayo kunye neyantlandlolo njengefilimu eyaqala ngolu hlobo.
UDisney Pstrong ufuna sidibane nabalinganiswa abatsha ekufumaneni uDory kwaye wabelane nabo ukuze sikwazi ukufumana umbono wezinto esinokuzilandela kule vidiyo intsha ye-3D. Ukusuka ku-Twitter ezi sele zisunguliwe abalinganiswa entle kakhulu kwaye emnandi ezibuyisa ukulandelelana kuyilo olukhulu kunye nomlinganiswa kuyo nganye yazo.
Sisasalelwe ziinyanga ezimbini phambi kokuqala kwenkulumbuso, ngoJuni 17. I-octopus enolo jongo lusolisayo kwaye iyahlekisa, ukrebe onobuhlobo ngala mehlo aphantse aphuma okanye isibini samatywina anembonakalo ephezulu yekratshi, asise kuCharlie noJenny, iintlanzi ezimbalwa apho sifumana kwakhona olo jongo luhle lokuKhangela kuNemo.
Sikwanayo nekharavani phantse yemizuzu emibini esinokubona kuyo Iivenkile ezibanjwa yile vidiyo intsha yoopopayi yeDisney mvanje iyakhazimla ngomsebenzi wakhe omkhulu.
Ukujongana ezantsi yenye yezona zilungileyo Amaxesha akutshanje apho indima edlalwa yimvakalelo engqondweni yomlinganiswa ophambili, isenza ukuba naluphi na uhlobo loluntu lucinge ngezinto amatyeli aliqela, ngakumbi ngokunxulumene nemfundo yeemvakalelo.
Ifilimu yoopopayi eza kusetyenziswa yokuphuculwa komgangatho wobugcisa we-3D Kwaye emva kweminyaka elishumi elinesithathu uya kuba nakho ukusizisela indalo yolwandle yokwenyani kwi-physics nakwezinye izinto ezikhethekileyo zolu hlobo lwefilimu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » I-Disney Pstrong ityhila abalinganiswa abatsha abathandekayo 'bokufumana uDory'
Imizobo emihle kaMichael Wilkinson